MY REMEMBRANCE: October 2007
This Myanmar typing tutor is developed by Ko Myat Khaing(KMD-Mdy II) 83rd st, between 31st st and 32nd st Mandalay.
ကျတော် မန္တလေးသွားတုန်း အစ်ကိုအိမ်က စက်ထဲမှာတွေတာနဲ့ ယူလာတာပါ။ ကျတော်လည်း အရင်က မြန်မာစာရိုက်တာ တော်တော်နှေးပါတယ်(အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ မမြန်ဘူး)။ ဒါလေးနဲ့ လေ့ကျင်ရင်တော့ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ Unicode တော့ မပါဘူးဗျ။ အသုံးများတဲ့ ဖွန့်တွေပါပါတယ်။လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာ
မှာသွားပါ။ ပိုင်ရှင်ကို တော့ ကျတေ့ာ်ခွင့်မတောင်း ထားပါဘူး။ ရောင်းတာလည်းမတွေဘူးတော့ free ပေးမယ်ထင်လို့ တင်လိုက်တာပါ။ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ copy . paste လုပ်ရုံပါပဲ။ စက်ထဲမှာတော့ မြန်မာ ဖွန့်တွေရှိရပါမယ်။
သတိ။။ typing program ထွက်ရင် ESC ကိုအရင်နှိပ်ပါ။ ပြီမှ exit ကိုနှိပ်ပါ။
Posted by puluque at Tuesday, October 23, 2007 1 comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, October 23, 20072comments Links to this post